MVRK: Daahfurka 3D Dhacdo Faneed | Martech Zone
Toddobaadkii hore waxaa laygu casuumay booqashadaydii ugu horreysay ee ah shirka dalwaddii internetka boos. Markaan runta ka hadlo, halka waqtiga qufulku ciyaarayo oo aan is idhi waxay noqon kartaa aalad fiican, waxaan ka walwalsanahay inay yara noqon karto geeky lagamana yaabo inay soo jiitaan ganacsiyada guud. Waxaan u maleynayay inay u egtahay sida ciyaar fiidiyoow ah marka loo eego sida dhabta ah ee aan ugu dhexjiro bey'ad ganacsi oo dhexdeeda ah.
Si kastaba ha noqotee, dalxiis uu adeegsaday oo igu casuumay ayaa runtii igu qanciyay kuna rajo weynaaday waayo-aragnimada:
Isu-socod - Waan awooday inaan dhex maro meesha, fiiriyo fiidiyowyada ama bandhigyada, shaqsiyadana aan dadka kala hadlo.
1: 1 Wadahadal - Waan awooday inaan bilaabo oo aan dadka kula xiriiro qolalka mucjisada ah halkaasoo wadahadalada iyo bandhigyada ay ka dhex dhacayaan annaga iyo cid kale toona.
Khibrad Dhex Dheer - Khibradda guud ma ahayn sida fiidiyowga ciyaarta oo dhan, waxay ahayd dadaal la'aan iyo adeegsi saaxiibtinimo. Waxaan gebi ahaanba arki karay qof aan farsamo ahaan aqoon u lahayn oo ku riyaaqaya.
Qufulka Post - Waxaan gebi ahaanba arki lahaa wadada halka shirkaddu ku yeelan karto dhacdo toos ah iyo dhacdo muuqaal ah oo isku mar ah tikniyoolajiyadan.
Hal ciyaaryahan oo ka tirsan suuqan ayaa ah MVRK, kuwaas oo suuqa keenaya Vx360. Barxadku wuxuu abuuraa deegaanno si gaar ah loo dhisay oo u beddelaya shabakadda nolol u ekaanta waayo-aragnimada dalwaddii taasi waxay kaloo ballaarisaa gaarista iyo gorfaynta si aan horay loo arag.
Iyadoo la adeegsanayo Vx360, MVRK waxay soo saartaa jawi caan ah oo gebi ahaanba astaan ​​u ah oo ka dhigaya khibrada kaliya ee dijitaalka ah inay dareento sida meel dhab ah oo adduunka ah iyada oo loo marayo sawirro tayo sare leh iyo qaabab leh sahamin 360-degree ah iyo socod socod dhacdo nolol u eg. Soo-booqdayaasha iyo ka-soo-qaybgalayaasha waxay ku wareegaan jawiga guud iyadoo loo marayo desktop ama aaladaha mobilada, iyagoo la kulmaya qolal kala duwan, isdhexgal, iyo in ka badan.
Barmaamijka MVRK's Vx360 wuxuu hodan ku yahay iskuxirnaansho iyo fursado kaqeyb qaadasho isticmaale iyada oo loo marayo maktabaddeeda astaamaha asaasiga ah ee loo qaabeyn karo baahiyaha gaarka ah iyo dadaallada leh:
Kujiro gundhig is-dhexgal Video-On-Demand (VOD)
Awoodaha socodka tooska ah
Isdhexgalka isgaarsiinta labada dhinac
La socoshada falanqaynta falanqaynta
WebXR iyo codsiyada kale ee xaqiiqda isku dhafan
Fursadaha ku saabsan sida noocyada iyo warshadaha kala duwan ay u adeegsan karaan waayo-aragnimadan cusub ee xeel-dheer ayaa ah mid aan xad lahayn. Kordhinta shirarka ka baxsan noocyada kale ee calaamadaha iyo IP, sida:
Madadaalada u qaad heerka xiga - Noocyada ku jira warshadaha sida adeegyada qulqulka, filimada iyo daabacaadda ayaa sare u qaadi kara sida dadku ula kulmaan jilayaasha iyo khadadka khadadka iyagoo taageerayaasha u sii dhaadhicinaya adduunyadooda ay jecel yihiin una oggolaanaya inay soo booqdaan had iyo jeer sida ay jecel yihiin, markay doonaan. Hawlaha xilliyada cusub ama waxa ku jira waxay ku ballaadheen gaadhista meel ka baxsan soo-baxa dhaqameed ee dhaqameed si loo oggolaado kasta fan si ay u galaan
Sii waxsoosaarka waxsoosaarka oo aan horay loo arag - Ku darista qayb ka mid ah websaydhka si loo soo saaro alaab cusub ayaa hadda ka dhigan in ka badan degel dhammaystiran. Wax-soo-saarka firfircoonaanta ma garanayo soohdin la leh deegaannada loo yaqaan 'Vx360-abuuray' oo adeegsadayaashu waxay helayaan khibrad sumcad sare leh si ay ula socdaan bixinta la taaban karo.
Ubadal dhacdooyinka shakhsiga ah iyo shirarka Xaddidnaanta cusub ee ka-qaybgalka shaqsi ahaaneed, magacyadu waxay u wareejin karaan waab adag, bandhig ama waayo-aragnimo dhacdo adduunka dijitaalka ah halkaasoo kaqeybgalayaashu ay ku dhex wareegi karaan meel ballaadhan oo ah waxyaabo qiimo leh oo xusuusin iyo is-dhexgal leh oo ka imanaya kafaala-qaadayaal kala duwan iyo la-hawlgalayaal magac leh. Barxada sidoo kale waxaa lagu lammaaneyn karaa dhacdooyinka shaqsi ahaaneed si kor loogu qaado gaarsiinta adduunka.
Tani waa jiilka soo socda ee waaya-aragnimada sumcadda leh; heer cusub oo aan xad lahayn. Teknoolojiyaddu waa horumar aan ku lahaan jirnay shaqooyinka ka hor adduunkeenna lama filaan ah ee loo baahan yahay ee loogu gudbo khibradaha dhijitaalka ah iyo kuwa casriga ah. Waxay si gaar ah khuseysaa hadda, waxaanna aaminsanahay inay kacaan ku tahay sida ay sumcaduhu u kobcaan oo ula falgalaan maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa iyaga inay bixiyaan wax badan - hal abuur badan, cibaaro badan, khibrado badan. Waxay abuurtaa dhibco taabasho badan oo firfircoon si ay u keenaan taageerayaasha hadda jira iyo kuwa suuragalka ah inay ugu sii daraan astaanta dhacdooyinka dalwaddii, shirarkii, waxqabadyadii iyo bandhigyadii.
Steve Alexander, aasaasaha iyo Sarkaalka Khibradda Sare ee MVRK
Ma xiiseyneysaa inaad aragto sida khibrada Vx360 ay tahay?
Tags: dhacdomvrkdhacdo dalwaddiivx360
8-da Astaamood ee "V" nooc wanaagsan oo wanaagsan